ကေမန်ကျွန်းစု COVID-19 နောက်ဆုံးရ
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » လုံခွုံမှု » ကေမန်ကျွန်းစု COVID-19 နောက်ဆုံးရ
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ကေမန်ကျွန်းစုသတင်းများ • သတင်း • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • သတင်းမျိုးစုံ
မေလ ၁ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် Cayman Islands COVID-1 update ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်အားတက်ဖွယ်ဆက်လက်ရှိနေခြင်းကြောင့်စည်းမျဉ်းအသစ်များအားမေလ ၄ ရက်၊ ။
သို့သျောလညျး, အသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုဖွင့်လှစ်နိုင်စွမ်းကိုအသိုင်းအဝိုင်းထုတ်လွှင့်မှတဆင့်လုံးဝဟုယူဆသည်သောယနေ့ရရှိသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်ကြောင့်သတိထားချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကိုသတိပြုမိစေရန်ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
ကာလအတွင်းကြေငြာအသစ်သောစည်းမျဉ်းများ၏ရလဒ်အဖြစ် ကေမန်ကျွန်းစု COVID-19 updateပုဂ္ဂလိကကဏ္ pool ရေကန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရှုခင်းများနှင့်ဥယျာဉ်ခြံ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မိုဘိုင်းကားအ ၀ တ်လျှော်ခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းတာယာပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
သက်ဆိုင်ရာကျေနပ်မှုရှိစေရန်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအာဏာပိုင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် COVID-19 protocols များ နှင့်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
စားသောက်ဆိုင်များ၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအစားအစာများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ည ၁၀ နာရီအထိ - တစ်နာရီအားဖြင့်နံနက် ၆ နာရီမှညနေ ၇ နာရီအထိနာရီတစ်နာရီတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စူပါမားကက်များ၊ စတိုးဆိုင်များနှင့်အသေးစားပစ္စည်းများ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရေးစခန်းများသည်တစ်နာရီလျှင်ည ၇ နာရီအထိဖွင့်နိုင်သည်။
လက်လီဘဏ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချေးငွေအသင်းများအတွက်နာရီ ၃ နာရီတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးယခုနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ရလဒ် ၃၉၂ ခုတွင် Grand Cayman အပေါ်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှဆိုးကျိုး ၃၉၁ ခုရှိသည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်း (၃) ခုစလုံးတွင် (၁၉၂၇) ခုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်လူပေါင်း ၉၄၉ ယောက်သည်ကျွန်းသုံးကျွန်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာစစ်ဆေးခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၇၇၂ ခုကို HSA တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၁၇၇ ခုသည်ဆရာဝန်ဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည်။
COVID 74 အတွက်အပြုသဘောဆောင်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခြားအချက်များကြောင့် ၇၄ ခုတွင် ၇၂ ခုတွင် ၃၂ ဦး မှာလက်ခဏာရှိသည်။
ကော်မရှင်နာသည်အချိန်ကာလများကိုလေ့ကျင့်ရန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းများအပါအ ၀ င်ညမထွက်ရအမိန့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြprovisions္ဌာန်းချက်အသစ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ sidebar တွင်ကြည့်ပါ။
သို့သော်မေလ ၃ ရက်နှင့်မေလ ၁၀ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့များအတွက်အိမ်အပြင်ဘက်အပြင်ဘက်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းများပိတ်ထားကာညမထွက်ရအမိန့်ကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်သည် ၂၀၂၀၊ မေလ ၄ ရက်၊ တနင်္လာနေ့နံနက် ၅ နာရီတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် COVID 19 စည်းမျဉ်းသစ်များပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်ပါဘေးဘားတွင်ကြည့်ပါ။
ကေးမန်းကျွန်းစုများသည်မေလ ၄ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်အဆင့် ၅ အမြင့်ဆုံးဖိအား (လက်ရှိ) အဆင့် ၄ မြင့်မားသောဖိနှိပ်မှုသို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိအန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အနိမ့်အပေါင်းရလဒ် covid-5 ရလဒ်များ၊ နှင့်ဆေးရုံနိမ့်နိမ့်။ အကယ်၍ အားလုံးကောင်းမွန်စွာသွားလျှင်အိမ်သိုလှောင်ရုံများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်များကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စူပါမားကက်များကဲ့သို့အများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းလာသောအခါလိုအပ်သည့်အတိုင်းဝေးကွာသောပရိုတိုကောများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းအဆင့် ၃ သို့ပြောင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်စစ်ဆေးမှုရလဒ်ပေါ်မူတည်သည်။
လက်ရှိတွင်နိုင်ငံသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စိစစ်ခြင်းစနစ်တွင်ရှိနေပြီးရလဒ်များအရအစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖိနှိပ်မှုအဆင့်နှင့်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့အကြားရွေ့လျားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအသိပေးသည်။
လူမှုရေးအကွာအဝေးများနှင့်အခြားနေအိမ်များကိုအိမ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားရန်အဓိကထားသည်။ သူကလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းကမ်းခြေများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောငါးဖမ်းခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှည်သည်းခံရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမဖြစ်နိုင်သဖြင့်လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အန္တရာယ်များစေနိုင်သည်။
Cayman Brac ရှိ Little Cayman နှင့်လူ ၂၄၅ ယောက်ကိုလူ ဦး ရေကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ ရလဒ်များမှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လျှင်အစိုးရသည်လာမည့်အပတ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များကိုရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်၊ ပထမမှာ Little Cayman နှင့်ထို့နောက် Cayman Brac တို့ဖြစ်သည်။ သူသည်ထိုကျွန်းသားများထံမှသည်းခံခြင်းကိုထပ်မံတောင်းခဲ့သည်။
မနက်ဖြန်သူတို့၏သင်္ဘောသား ၁၀% အားစမ်းသပ်မှုနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသူများ၏ရလဒ်များအပြီးတွင် NRA သည်မကြာမီလိုအပ်ပြီးစီစဉ်ထားသည့်လမ်းများကိုစတင်မည်။
Cayman ၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှဖမ်းဆီးရမိသောငါးဈေးကွက်သည် Cruise Dock (South Terminal) တွင်ဖွင့်လှစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေးကွာသောပရိုတိုကောများဖြင့်လည်ပတ်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ခရစ်ကက်မြေပြင်ရှိလယ်သမားစျေးကွက်မှ Hamlin Stephenson ကစျေးကွက်သည်လည်းအလားတူစတင်လည်ပတ်လိမ့်မည်။
စည်းမျဉ်းအသစ်များအရလူ ၆၀၀၀ ခန့်ကိုလမ်းများပေါ်တွင်တင်ထားလိမ့်မည်။
အိမ်ခြံမြေနှင့်အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်ရှိအစိမ်းရောင်အိုင်ဂူနာကိုသတ်ခြင်းနှင့်ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို curfewtime.ky မှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကစည်းမျဉ်းအသစ်များအရသူတို့၏အမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလူနှင့်လူအနိမ့်ဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ပြprovisions္ဌာန်းချက်အသစ်များသည်ကျောက်တုံးထဲမထည့်ဘဲကောင်းမွန်သောစစ်ဆေးမှုရလဒ်များဆက်လက်ရှိနေသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်သမားအသစ်များအားလုံးသည်၎င်းတို့၏အလုပ်ရှင်များထံမှစာများသယ်ဆောင်ရန်သာလိုအပ်ပြီး၊ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ရဲသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ် ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သည်
၀ န်ကြီးချုပ်သည်မိဘများအကြားကလေးများအားချုပ်နှောင်ထားရန်လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းများကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရသူများအတွက်အမိုးအကာရှာရန်ပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ညမထွက်ရအမိန့်များအရယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အောက်ပါ sidebar တွင်ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ရလဒ် ၃၉၀ မှရလဒ်များသည်အလွန်အားတက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအစိုးရ၏သတိကြီးကြီးရင့်ကျက်သောတိုင်းတာသည့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြီးမားစွာဖော်ပြထားခြင်းသည်အန္တရာယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အချက်များကိုဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ La Ceiba သို့လေယာဉ်နှစ်စင်းလုံးပြည့်နေသည်။ ခရီးသည်အားလုံးသည်လိုအပ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ကိုသူ၏ရုံး ၀ န်ထမ်း Ms Maria Leng သို့ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တနင်္လာနေ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်မေလ ၅ ရက်သောကြာနေ့မေလ ၈ ရက်လေယာဉ်ဖြင့်ပေးပို့သင့်သည်။ အီးမေးလ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကော့စတာရီကာကိုမေလ ၈ ရက်နေ့သောကြာနေ့တွင်သွားမည် စာအုပ်ဝယ်ရန် 8-949 တွင် CAL ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
လေယာဉ်ရှာသူများအား emergencytravel.ky သို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် www.exploregov.ky/travel တွင်သုံးပါ။
မေလ ၄ ရက်နှင့်အင်္ဂါနေ့တို့တွင်ကရစ်ဘီယံ၌တပ်ဖြန့်ချထားသည့်တော် ၀ င်ရေတပ်သင်္ဘောဖြစ်သော RFA Argus သည် Grand Cayman ကမ်းခြေတွင်ရှိပြီးမေလ ၅ ရက်တွင် Cayman Brac မှပူးတွဲလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်အောက်ပါ sidebar တွင်ကြည့်ပါ။
သူသည် R3 Cayman ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် National Recovery Fund အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်သီးခြားလွှတ်ပေးရန်၌ရှိကြ၏။
လတ်တလောတွင်ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Hon ။ John Seymour said:
၀ န်ကြီးကလူတွေကိုဒီစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ကာလမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ အောက်က sidebar ကိုကြည့်ပါ။
သူသည်ဒေသခံဂီတသမားများကိုတစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ကြေးဒေါ်လာတစ်ထောင်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီငွေပမာဏကိုမေလကုန်မှာပေးချေမှာပါ။ ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ချင်းစီဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်ရှာသောသူတို့သည်အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ် 936-2369 ခေါ်ဆိုပါ။
ယနေ့ MLA များအားလုံးကိုမဲဆန္ဒနယ်များအကြားဖြန့်ဝေရန်တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများတပ်ဆင်ထားသည်။
ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာအနေဖြင့်အစိုးရသည်စိန့်လူစီယာသို့စမ်းသပ်စက် ၅၀၀၀ ကိုပြန်လည်ပေးပို့ပြီးလိုအပ်သည့်ပိုက်များ၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်အရေးကြီးသောကိရိယာများကိုပို့သည်။
HCCI နှင့် HSA တို့၏ကျေးဇူးကြောင့် PPE ဝတ်စုံ ၃၀,၀၀၀ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဘေးဘား 1: ကော်မရှင်နာညမထွက်ရအမိန့်မှအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
ရဲကော်မရှင်နာ Derek Byrne မှညမထွက်ရနှင့်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်နှင့်မေလ ၄ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အပြောင်းအလဲများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူက
“ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့်ညမထွက်ရအမိန့်သို့မဟုတ်အမိုးအကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်စနေနေ့နေ့စဉ်နံနက် ၅ နာရီမှည ၇ နာရီအကြားလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့်တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၄ ရက်၊ ၂၀ ရက်သည်တစ်နာရီတိုးမြှင့်ပြီးနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိနံနက် ၅ နာရီမှည ၈ နာရီအထိပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ခက်ခဲသောညမထွက်ရအမိန့်သို့မဟုတ်အပြည့်အ ၀ ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများမှအပယနေ့ညနေနှင့်မနက်ပိုင်းစနေနေ့ည ၇း၀၀ နာရီနှင့်ညနေ ၅ နာရီအကြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့်တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်၎င်းသည်ပြောင်းလဲသွားပြီးတစ်နာရီတည်းဖြင့်ည ၈ နာရီမှမနက် ၅ နာရီအကြားညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်
လေ့ကျင့်ခန်းကိုမိနစ် ၉၀ ထက်မပိုသောယနေ့နှင့်မနက် ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်နှင့်ညနေ ၆း၄၅ နာရီအတွင်းခွင့်ပြုထားသည်။ လာမည့်တနင်္လာနေ့ ၄ ရက်တွင်မိနစ် ၉၀ လေ့ကျင့်ခန်းကိုနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့ ၅ နာရီ ၁၅ နာရီနှင့်ည ၇ နာရီအကြားခွင့်ပြုမည်။ ညမထွက်ရအမိန့်အမိန့်ကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေတွင်လေ့ကျင့်ခန်းကာလများကိုခွင့်မပြုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မေလ ၃ ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့၊ မေလ ၁၀ ရက်တို့တွင် ၂၄ နာရီညမထွက်ရအမိန့်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုထိုဝန်ဆောင်မှုများမှကင်းလွတ်ခွင့်မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများ မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမှသူတို့၏နေအိမ်များမှထွက်ခွာခွင့်မပြုရ။ အများပြည်သူနေရာများတွင်လေ့ကျင့်ခန်းကာလကိုထိုနေ့ရက်နှစ်ခုတွင်ခွင့်မပြုပါ။
Cayman ကျွန်းတစ်လျှောက်ရှိအများပြည်သူပိုင်သဲသောင်ပြင်များသို့သဲသောင်ပြင်ရောက်ရှိခြင်း - မေလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှမေလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှမေလ ၁၅ ရက်အထိ ၂၄ နာရီညမထွက်ရအမိန့်သို့မဟုတ်အများပြည်သူပိုင်ကမ်းခြေများအားလုံးပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကိုင်မန်ကျွန်းတစ်လျှောက်ရှိအများပြည်သူပိုင်ကမ်းခြေများသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သောကြာနေ့မေလ ၁ ရက်၊ မေလ ၁ ရက်၊ ၂၀း၂၀ မေလ ၁၅ ရက်အကြားကာလအတွင်းမည်သည့်အချိန်၌မဆိုကျွန်းများရှိခြင်း။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်၊ ဤအချက်သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားတားမြစ်ထားသောကေးမန်ကျွန်းစုတစ်လျှောက်ရှိအများပြည်သူပိုင်ကမ်းခြေအားလုံးအားလုံးလုံးလျားလျားပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (င) ကေမန်ကျွန်းတစ်လျှောက်ရှိမည်သည့်အများပိုင်သဲကန္တာရတွင်မဆိုအ ၀ င်အထွက်၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ဤသည်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုမေလ ၁၅ ရက်၊ သောကြာနေ့မနက် ၅ နာရီအထိဖြစ်သည်။
ညမထွက်ရအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကျပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်လုံးကျခံမည့်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်သည်ဟုလူများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သတိရမိသည်။
Sidebar 2: Premier မှစည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလ ၄ ရက်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် Covid-19 စည်းမျဉ်းများ၊ ၂၀၂၀ (“ the Regulations”) ၏ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်မှုသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (Covid-2020 ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ခြင်း) စည်းမျဉ်းများ (လက်မှတ်) စည်းမျဉ်းများ ,4နှင့်သူတို့အားပြင်ဆင်ချက်။
သို့သော်မှတ်သားသင့်သည်မှာအနည်းငယ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်“ နေရာထိုင်ခင်း” ပြဌာန်းချက်များသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်ယခုအခါအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ပြီးမနက် ၆း၀၀ နာရီနှင့်ည ၇း၀၀ နာရီများအတွင်းအချိန်မရွေးလည်ပတ်ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့ရာတွင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်။ အာဏာပိုင်။
စာတိုက်များသည်ယခုအခါအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမနက် ၆း၀၀ နာရီနှင့်ည ၇း၀၀ နာရီများအတွင်းအချိန်မရွေးလည်ပတ်ခွင့်ပြုထားသည်။
လက်လီဘဏ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချေးငွေအသင်းများကိုနံနက် ၉ နာရီနှင့်ညနေ ၄ နာရီတို့တွင်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားသည်။
အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအပေါ်ကန့်သတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြောင်းလဲမှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်းများသို့အလည်အပတ်ခရီးကိုထိုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်စုဆောင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများကသာခွင့်ပြုသည်။
ယခုအခါလူများအားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းလူသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောနေရာတွင်သာခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ယခုအခါလူများအားလက်လီစတိုးဆိုင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန်လူတစ် ဦး ကထောက်ပံ့ပေးသောနေရာတွင်သာဖြစ်သည်။
ယခုအခါလူများအားကားအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်ကားကိုတင်ဆောင်ရန်လူတစ် ဦး ကသာခွင့်ပြုသည်။
လူတစ် ဦး အားကားဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တာယာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်လူတစ် ဦး သည်မိုဘိုင်းကားရေဆေး ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းယာယာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရေကန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုယခုအခါပုဂ္ဂလိကအလွှာရေကန်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီးရေကန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်သာဖြစ်သည်။
အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမိုးအကာမှသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများ၏စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းတရားဝင်သို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောတာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်နေစဉ်တွင် -
နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ်နာတာရှည်နာကျင်မှုကုသမှုပေးသူ။
ပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်းများရှိကျောင်းသုံးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများ။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သူများ။
ရေကန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံနှင့်ဥယျာဉ်ခြံ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသောသူများ။
မိုဘိုင်းကားအ ၀ တ်လျှော် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းယာယာပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ။
ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အဝတ်လျှော်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ၀ န်ထမ်းများ။
စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ်ကုန်စုံပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်သည့်အချိန်အထိ၊ လူများထံမှအစားအစာများစုဆောင်းရန်အချိန်ကာလကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။
စားသောက်ဆိုင်များတွင်အစားအစာဖြည့်ဆည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အလုပ်ခန့်ထားသူများသည်ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအစာသို့မဟုတ်ကုန်စုံပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စားသောက်ဆိုင်မဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ၀ န်ထမ်းများသည်ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကောက်ယူခြင်းကိုတားဆီးသည့်သို့မဟုတ်အစားအစာထုတ်ယူရန်အတွက်စားသောက်ဆိုင်များသို့သွားသောသူများသည်ည ၇း၀၀ နာရီအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ နံနက် ၅း၁၅ နာရီနှင့်ည ၇း၀၀ နာရီအကြားလူများကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီခွဲခွဲထက်မကလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။
အများပြည်သူရေကူးကန်၊ အလွှာရေကန်၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအားကစားရုံများတွင်လှည့်ပတ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်၍ မရကြောင်းလူများကိုသတိပေးသည်။
တရား ၀ င်တာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်အရေးကြီးသောခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်သောတရားစွဲဆိုမှုများတွင်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးစဉ်များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောရှေ့နေများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အချို့နေရာများသို့သွားရန်အထူးခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြီးမင်းတို့သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်များ၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးသွားနိုင်မည့်နေရာများသို့စာတိုက်များနှင့်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းထားပါသည်။
ထို့ကြောင့်သတိပေးချက်အနေဖြင့် A မှ K အက္ခရာများဖြင့်စတင်သောသူတို့၏အမည်များသည်တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်သောကြာနေ့များ၌စူပါမားကက်များ၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူသည့်စတိုးဆိုင်များနှင့်အသေးအဖွဲများ၊ လက်လီဘဏ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ခရက်ဒစ်ယူနီယံများ၊ ။
အင်္ဂါနေ့၊ ကြာသပတေးနှင့်စနေနေ့များ၌သာရည်ညွှန်းထားသောနေရာများသို့ L မှ Z အက္ခရာများဖြင့်စတင်သောအမည်များသည်သာလျှင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးကိုသာသွားရမည်။
လူတစ် ဦး ၌နှစ်ဆစည်ဆန်သောအမည်သစ်ရှိသည့်လူတစ် ဦး ၏နှစ်ဆစည်ဆန်သောအမည်၏အမည်သည်ထိုသူအားသတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်၍ အသုံးပြုသောအမည်ဖြစ်ရမည်ကိုသတိပေးထားသည်။
ထိုစည်းမျဉ်းများကိုအစိုးရမှသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပါက၊ ၂၀၂၀၊ မေလ ၄ ရက်မှ ၂၀၂၀ မေလ ၁၈ ရက်အထိဆက်လက်တည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Sidebar3- ချုပ်နှောင်ထားမှုနှင့်အမိုးအကာလိုအပ်ချက်ကိုချုပ်နှောင်ထားသည်
မိဘများအနေဖြင့်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့အကြားသဘောတူညီမှုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တရားရုံး၏အမိန့်ဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းများအတွက်မိမိတို့၏ကလေးများအား ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရမည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရမူလပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သောလက်ရှိအခြေအနေအရထိခိုက်နစ်နာမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လူတစ် ဦး သည်နေထိုင်ရာနေရာမှထွက်ခွာနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်များကြောင့်လူတစ် ဦး ၏နေထိုင်ရာနေရာကိုပြောင်းလဲခြင်းလည်းပါဝင်နိုင်သည်။ ” (ဤသည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ )
Sidebar4RFA Argus စစ်ဆင်ရေးကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှမှတ်ချက်ပြုသည်
လုံခြုံရေးအကြံပေးအဖွဲ့သည် RFA Argus ကျွန်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့်အမျှတော်ဝင်ရေတပ်ကာရစ်ဘီယံလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှတစ်ခုသည်မေလ ၄ ရက်တနင်္လာနေ့ (Grand Cayman) နှင့်မေလ ၅ ရက်အင်္ဂါနေ့ (Cayman Brac) ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်ခရီးစဉ်သည် Covid-19 အခြေအနေကြောင့်ကျွန်းများသို့မသွားရန်သို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များကိုလက်ခံရန်မဟုတ်ပါ။
သင်္ဘောပေါ်တွင် Merlin ရဟတ်ယာဉ် ၃ စင်းနှင့် Wildcat ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းသာရှိသည်။ တနင်္လာနေ့ကသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိုင်နေ့တွင် Grand Cayman နှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် RCIPS အဏ္ဏဝါယူနစ်သင်္ဘောများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင်ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးပျံသန်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်္ဘောတွင် Disaster Relief စတိုးဆိုင်များအပြင် Royal အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အရေးကြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရာ၌ကူညီနိုင်သည့်အခြားအထူးကု ၀ န်ထမ်းများပါ ၀ င်သည်။
RCIPS ရဟတ်ယာဉ်သည်ရေတပ်မှရဟတ်ယာဉ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ရေဒီယိုနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့သည်လာမည့်ဟာရီကိန်းရာသီနှင့်ပုံမှန်ကျွန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအထွေထွေအကျဉ်းချုပ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာတွင်အဓိကandရိယာများနှင့်ဆင်းသက်မည့်နေရာများ (ဆင်းသက်မည်မဟုတ်ပါ) ကိုရှာဖွေနေကြသည်။
အင်္ဂါနေ့ ၅ ရက် - RFA Argus သည် Sister Islands အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး Little Cayman နှင့် Cayman Brac တို့၏အလားတူနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်တဖန်မဆင်းသက်ရှိလိမ့်မည်။
နမူနာ COVID 19 စစ်ဆေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကနမူနာစုဆောင်းရန်အသုံးပြုသော swab ၅၂၀၀၀ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူတိုးတက်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်တစ်သုတ်တစ်သိန်းကိုလည်းမကြာမီရောက်ရှိရန်ရှိသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်နွှယ်သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊
တရုတ်နိုင်ငံရှိထုတ်လုပ်သူများထံမှရေခဲမုန့်များထောက်ပံ့ရန်စစ်ဆင်ရေးကို Chris Duggan, Gary Gibbs နှင့် Simon Fenn ဦး ဆောင်သည့် Dart ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အဖွဲ့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှကုန်ပစ္စည်းများလွှတ်ပေးရေးအတွက်ကူညီရန် Dart နှင့်ကွမ်ကျိုးရှိဗြိတိသျှကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အိုင်ဗင်ဟာရီကိန်းပြီးနောက်အီဗန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကူမန်ကျွန်းစုအမျိုးသားပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေ (R3 Cayman Foundation) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်စီစဉ်ထားခြင်းတို့ကိုကြိုဆိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀ မ်းသာကျေနပ်မိပါကြောင်း။
ဒီအစပျိုးမှုနှစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့သူအားလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုရက်ရောစွာပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ken Dart မှကန ဦး လှူဒါန်းခြင်းသည်အရေးကြီးသောဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤရန်ပုံငွေနှစ်ခုသည်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သဘာဝနှင့်လူလုပ်ဘေးအန္တရာယ်များမှကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကေမန်အား ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိစေလိမ့်မည်။
La Ceiba, Honduras သို့ပျံသန်းမှုနှစ်ခုစလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်ပြည့်နေပြီ။ ခရီးသည်အားလုံးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်များကိုပေးပို့ရမည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] တနင်္လာနေ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ယနေ့အနီးကပ်နှင့်မေလ ၈ ရက်ခရီးစဉ်အတွက်အင်္ဂါနေ့ ၅ ရက်။
Cayman လေကြောင်းလိုင်းနှင့်ကနေဒါရီကာ San Jose သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုမေလ ၈ ရက်သောကြာနေ့တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ သင်၏လက်မှတ်များကို Cayman Airways နှင့် 8 949 တွင်တိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်
online tool ၏အောင်မြင်မှုကြောင့် Emergency Travel helpline သည်မေလ ၄ ရက်၊ တနင်္လာနေ့မှနာရီအသစ်သို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ ဖုန်းများကိုတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့မနက် ၉ နာရီမှညနေ ၁ နာရီထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်း tool www.exploregov.ky/travel မှတဆင့်အချိန်မရွေးမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
Sidebar5- ၀ န်ကြီး Seymour သည် COVID-19 မှစိတ်ဖိစီးမှုများကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားသည်
“ ဒီနေ့ငါစိတ်ရောဂါအကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းဒီခေါင်းစဉ်ဟာငါ့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊
Coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးခံစားနေရသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသည်ဟူသောအယူအဆသည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖျက်ဆီးနေသောမသိသော၊ မမြင်ရသောပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ထဲကတချို့ဟာတောင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပ်ပြီးမကျန်းမာတဲ့အရာတွေသုံးပြီးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတောင်မှ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်စာနာတတ်ပေမယ့်ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆရာဝန်များကကျွန်တော်တို့ကိုအခုလုပ်ဖို့ပြောနေသည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုအမြဲသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ဒေါက်တာ Lee ကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခဲ့သည့်အတိုင်းဤအရာများသည်ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေအသည်းအသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကြီးကြီးမားမားရှိသည်။
မင်းကိုသတိရစေချင်တယ်မင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့သင်ရုန်းကန်နေရမယ်လို့မထင်ဘူးတောင်မှငါတို့ရှိသမျှသည်စာရင်းစစ်ရန်လိုသည်။ အမှန်တရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘ ၀ တွေအပေါ်ပိုပြီးဖိစီးမှုတွေခံစားရလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်စေ၊ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ဘဏ္ancesာရေးများအတွက်ဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့အပေါ်သက်ရောက်နိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမည်သူမျှထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုချင်းစီသည်ကွဲပြားခြားနားစွာကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ်မူတည်သည်။
ဤအရာသည် Cayman ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ရောဂါနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာပြissuesနာအမျိုးမျိုး၏အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အပတ်အစောပိုင်းက ၀ န်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းငါတို့အားလုံးသည်လူသားများဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဖြစ်ရန်ဘာသာရပ်မှာ -
သို့မဟုတ်အချို့မိသားစုများအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့ရှားပါးသောအခြေအနေတွင်အချို့သောသူများသည်“ ဖျားနာခြင်း” နှင့်ကြုံတွေ့ရချိန်တွင်မိသားစုမှထွက်ခွာခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုမေးကြည့်ရအောင်။ နည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းရှိလား။ သို့မဟုတ်ပင်အလွန်ချွတ်? သင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်? သင်လေ့ကျင့်နေပါသလား သင်ကျန်းမာစွာစားပြီးလုံလောက်စွာစားပါသလား။ မင်းကောင်းကောင်းလုပ်နေတာလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြissuesနာများကို ပိုမို၍ ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုပိုမိုအလွယ်တကူရှာဖွေတတ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စိတ်ခံစားမှုယိုယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနိုင်သည်ဟုခံစားနေကြသောကြောင့်၊
၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤအရာကိုအစမှအဆင်ပြေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ဤပြissueနာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုများရရှိထားကြောင်းကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏သတင်းစကားမှာအဆင်ပြေရန်မသင့်တော်ပါ။ သင်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုင်းကို 1-800-534-6463 သို့ခေါ်ဆိုပါ၊ ၎င်းသည် ၁-၈၀၀-၅၃၄ (MIND)၊ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့၊ မနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိသင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များကိုဤမှတဆင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။